Maitiro ekuvandudza yako WiFi ichichinja chiteshi cheRouter | IPhone nhau
Maitiro ekuvandudza yako WiFi nekuchinja chiteshi cheRouter
IPad nhau | | iPhone, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Iwe une 300Mbps fiber kubatana, mamiriro-e-iyo-hunyanzvi komputa uye inoshamisa router iyo ingori 3 metres kubva komputa yako, asi zvisinei iyo internet inononoka. Anodana kune anoshanda, iyo technician iyo inoshanyira iwe kumba kuti uone kubatana kwako uye zvese zviri kufamba mushe, zvisinei yako WiFi yekubatanidza inouraya, kwete chete pakombuta yako, asiwo paPadad yako, yako iPhone, nezvimwe. Usati waita kupenga uye kushandisa chitsama chakanaka cheeuro kushandura router, watarisa here kuti chiteshi icho chaanotepfenyura ndicho chakakodzera kwazvo? Kuzadzikiswa kwenetiweki munzvimbo yako kunokanganisa kukanganiswa kweiyo netiweki yekubatanidza internet, uye mhinduro yacho iri nyore uye zvakare haudi chero chekubhadhara chikumbiro nekuti OS X inokupa iwe anodiwa maturusi. Isu tinotsanangura maitiro ekugadzirisa matambudziko ako uye sarudza yakanakisa chiteshi kuitira kuti kubatana kwako kuve kwakaringana.
Kana iwe uchigara mubhokisi remafurati seni, iwo runyorwa rweanowanikwa maWiFi network anogona kunge akareba seangu, kana kunyange akareba. Izvi zvinoreva kuti komputa yako inogashira zvisingaverengeke zvinoita kuti yako wega network isagashirwe nemhando yakakwana. Kana yako router ichibvumira, unogona kusarudza 5GHz bhendi iyo ine kupindira kushoma, asi yatotanga kuwedzera uye haina kuita se "yakachena" sepakutanga. Kusarudza chiteshi chemahara (kana hachina kuguta) ndiyo yakanakisa sarudzo yekukasira kugadzirisa yako internet kubatana. Kuti tiite izvi, tiri kuzovhura OS X Wireless Diagnostic application, iyo yatinozadzisa nekudzvanya iyo «Alt» kiyi pane yedu Mac isu tinodzvanya pane iyo WiFi icon.
Sezvauri kuona, iyo ruzivo iyo OS X inotipa isu patinenge tichiita izvi yakakura zvikuru uye sarudzo yeku «Open Wireless Diagnosis». Tinodzvanya pane iyo sarudzo uye isu tinomirira.
Iwindo rinowoneka ratisingazombotarisisa. Mubhawa repamusoro, tinya pa «Window> Ongorora» uye hwindo rinowoneka ndiro ratinofanira kutarisisa.
Kune ese maWiFi netiweki atinawo pamaoko edu, asi zvinonyanya kukosha, mukoramu yekuruboshwe inotiratidza nzira dzakaringana dzekushandisa mune 2,4GHz uye 5GHz bhendi. Ndo avo vane kupindirana kushoma uye nekudaro iwo atinofanira kusarudza mune yedu router. Iye zvino isu tinongofanirwa kuwana iyo router kumisikidzwa uye nekuvasarudza ivo kuti zvese zvishande sezvazvinofanira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvandudza yako WiFi nekuchinja chiteshi cheRouter
Steve Wozniak: "Hatigone kuvimba neHurumende"
Facebook inowedzera vhidhiyo yayo yekushambadzira sevhisi kuEurope